Manolotra Apple Pay izao ny Citibank any Australia, Singapore ary Hong Kong | Avy amin'ny mac aho
Na dia nandeha tsikelikely aza izy io, ny fomba fandoavam-bolan'ny Apple, Apple Pay, dia miantsona amin'ny firenena maro kokoa miaraka amin'ireo andrimpanjakana ara-bola mihamaro. isan-kerinandro Tokony hampahafantarintsika ireo mpanaraka antsika ny andrim-panjakana vaovao izay manomboka mampiasa Apple Pay ary tsy ho latsa-danja izany.
Amin'ity tranga ity dia ny karatra Citybank any Australia, Singapore ary Hong Kong, narahin'i Taiwan tamin'ny faran'ity taona ity. Ny karatra Citybank Afaka mampiasa Apple Pay izy ireo izao sy izay rehetra tafiditra ao.
Ireo mpandray karatra Citi dia afaka mampihetsika ny Apple Pay amin'ny alàlan'ny fanokafana ny rindrambaiko Wallet, kitiho ny mari-pamantarana miampy amin'ny zoro havanana ambony, kitiho ny bokotra Continue, ary amin'ny alàlan'ny fametrahana ny carte de crédit ao anaty sary eo amin'ny efijery na amin'ny alàlan'ny fampidirana an-tanana ny antsipirian'ny karatra.
Apple Pay dia ekena amin'ny toerana an'arivony miaraka amin'ny rafitra fandoavam-bola tsy misy fifandraisana any amin'ny firenena rehetra, saingy mila iPhone, iPad, na Apple Watch mifanentana aminy.
ankehitriny izahay koa dia nanambara ny fahatongavan'ny Apple Pay teo aloha a BBVA sy BancaMarch. Tsy isalasalana fa ny ekipa ananan'i Apple ny fifanarahana rehetra amin'ireo andrim-bola ireo dia matanjaka fa tsy amin'ny diabeny. Mbola hitantsika indray ny hevitra avy amin'i Apple fa tamin'ny vidiny voalohany handaozana ny sisin-tanin'i Etazonia, dia mandeha tsikelikely amin'ny sisa amin'izao tontolo izao izy.
Any Espana dia efa misy banky sy banky fitehirizana marobe manome izany fahafaha-manao izany, na dia manantena hatrany ny mpanjifa Bankia fa afaka mankafy an'io karazana fomba fandoavam-bola io. Amin'izao fotoana izao, ny karatra Carrefour no mamela antsika hanao an'ity karazana hetsika ity, eny, miaraka amin'ny fetra malaza 300 euro isam-bolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Citibank izao dia manolotra ny Apple Pay any Aostralia, Singapour ary Hong Kong
Ny setana LEGO Batman dia amidy mandritra ny fotoana voafetra